Ahoana ny fomba fampiasana ny fitsangatsanganana an-tsokosoko ho an'ny mpanjifa mba hanatsara ny ezaka amin'ny ezaka ara-barotra amin'ny fangatahana | Martech Zone
Hanatsara ny fitakiana fitakiana Ny ezaka amin'ny varotra dia mahomby, mila fahitana amin'ny dingana rehetra amin'ny dian'ny mpanjifanao ianao sy ny fitaovana hanarahana sy hanadihady ny angon-drakitra mba hahafantarana izay manosika azy ireo ankehitriny sy amin'ny ho avy. Ahoana no anaovanao an'izany? Soa ihany, ny fitsangatsanganana momba ny dia nataon'ny mpanjifa dia manome hevi-dehibe momba ny fomba fitondran-tenan'ireo mpitsidika sy ny safidiny mandritra ny dian'ny mpanjifa iray manontolo. Ireo fahitana ireo dia ahafahanao mamorona traikefa ananan'ny mpanjifa nohatsaraina izay manentana ny mpitsidika hahatratra ny teboka farany ao amin'ny fantsom-pivarotanao.
Inona marina ny analytics momba ny dia nataon'ny mpanjifa, ary ahoana no fomba hampiasanao azy hanatsarana ny paikadim-barotra momba ny varotra? Andao hojerentsika.
Inona ny atao hoe Analytics Journey an'ny mpanjifa?
Ny analytics momba ny dia nataon'ny mpanjifa dia fampiharana iray izay mamakafaka tsara ny dian'ny mpanjifa. Ity rindranasa ity dia misy ny fanarahana sy ny famakafakana ny fomba fampiasan'ny mpanjifanao fantsona maro samihafa hifaneraserana amin'ny marikao. Izy io dia mamakafaka ireo fantsona rehetra - ampiasaina amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy - izay ifandraisan'ny mpanjifanao mivantana.
Ireto fantsona ireto dia mety misy:
Fantsona misy ifandraisany amin'ny olombelona, ​​toy ny foibe fiantsoana
Fantsom-pifandraisana roa-lalana, toy ny doka fampisehoana
Fantsona mandeha ho azy tanteraka, toy ny fitaovana finday na tranokala
Fantsona miasa ao amin'ny antoko fahatelo, toy ny fivarotana antsinjarany tsy miankina
Fantsona manome fanampiana ny mpanjifa mivantana, toy ny fivezivezena amin'ny tranonkala iraisana na resaka mivantana
Fa maninona no mila Analytics Journey an'ny mpanjifa?
Na dia miha sarotra aza ny dian'ny mpanjifa, dia andrasan'ny mpanjifa ankehitriny ny fifandraisan'izy ireo amin'ny marikao - manerana ny fantsona maro - hitoviana amin'ny mpitarika CX toa an'i Amazon sy Google. Raha tsy mandeha amin'ny laoniny ny dian'ny mpanjifanao dia ho afa-po izy ireo ary hifindra haingana amin'ny mpifaninana. Mifanohitra amin'izany, asehon'ny fandinihana fa traikefa nahafinaritra an'ny mpanjifa mitondra ny fitomboan'ny vola miditra.
Ny fandinihana dia mampiseho koa fa ny fampiasam-bola amin'ny fitantanana fanehoan-kevitry ny mpanjifa dia tsy ampy hanatsarana ny haavon'ny CX anao. Ity tsy fahombiazana ity dia avy amin'ny zava-misy fa amin'ny ankapobeny dia ny teboka amin'ny dia no angatahina. Mampalahelo fa midika izany fa ny sasany amin'ny dia ataon'ny mpanjifa ihany no voasambotra, milaza diso ny zavatra niainan'ny mpanjifanao amin'ny ankapobeny.
Ity data tsy feno ity dia mampihena ny fahafahanao mahazo sary feno sy fahitana marina momba ny fahombiazan'ny tetikady marketing. Mamela anao ho mahantra ihany koa amin'ny fampivoarana ny traikefan'ny mpanjifa sy mamatotra ny zavatra niainan'ny mpanjifa amin'ny vokatra azo tsapain-tanana.
Ny fitsangatsanganana momba ny dia nataon'ny mpanjifa no tetezana manelanelana ny fihetsiky ny mpanjifanao sy ny vokatrao amin'ny orinasa. Ny programa analytics momba ny dia ho an'ny mpanjifa dia ahafahan'ny orinasanao manara-maso, mandrefy ary manatsara ny zavatra niainan'ny mpanjifa manerana ny fikitihana sy ny vanim-potoana maro, izay mandrakotra ny dian'ny mpanjifa iray manontolo.
Ny fampiasana analytics amin'ny dian'ny mpanjifa dia ahafahan'ny mpitarika marketing amin'ny fangatahana hamaly fanontaniana sarotra, toy ny:
Inona no mahatonga ny fihetsiky ny mpanjifantsika?
Inona avy ny fifandraisana na dia taloha nataon'ny mpanjifanay izay nitarika azy ireo teto?
Inona avy ireo làlan'ny mpanjifanay amin'ny diany?
Inona avy ireo vokatra azo inoana ho an'ny mpanjifa tsirairay na ny dia?
Ahoana no fiantraikan'ireny dia sy vokatra ireny eo amin'ny vokatry ny asa aman-draharahantsika?
Inona no tanjon'ny mpanjifanay?
Ahoana no hifandraisan'ny tanjon'izy ireo amin'ny tanjon'ny orinasa?
Ahoana ny fomba hanampiantsika lanja ny mpanjifa tsirairay ary hanatsara ny traikefan'ny mpanjifany?
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny Analytics Journey an'ny mpanjifa?
Ny analytics momba ny dia nataon'ny mpanjifa dia singa iray tena ilaina amin'ny programa fitantanana fitsangatsanganana mpanjifa mahomby. Io ilay sombin-javatra izay manadihady angon-drakitra feno sy mamorona fomba fijery azo tsaboina. Ny hevi-baovao azo avy amin'ity karazana programa fitantanana mpanjifa ity dia sarobidy ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa. Ity misy fomba.
Fanandramana mpanjifa nohatsaraina (CX) - Ny fahitana azo tamin'ny alàlan'ny famakafakana mahomby amin'ny dian'ny mpanjifanao dia ahafahanao manatsara ny dingana tsirairay eny an-dàlana ho an'ny traikefa ankapobeny tsy misy tohika.
Vokatry ny fahombiazana azo refesina - Ho fanampin'izany, ny famakafakana mitohy dia mamela anao handrefy hatrany ny zava-bitan'ny hetsika fitadiavam-bola amin'ny mpanjifa manerana ny fantsona maro ary hamaritra ireo KPI mety handrefesana ny dia tsirairay.
Fanadihadiana momba ny angona avy amin'ny fantsona sy fandaharam-potoana maro - Rehefa mijery ny dian'ny mpanjifa manerana ny fantsona maro sy ny fotoanany dia miharihary ny teboka fanaintainana tena izy. Ny famaritana ireo teboka fanaintainana ireo dia ahafahanao mihetsika ary misy fiantraikany tsara amin'ny dian'ny mpanjifanao.
Ahoana no ahafahako manatsara ny Analytics Journey an'ny mpanjifa? - Ny fanadihadiana momba ny dia nataon'ny mpanjifa dia mazàna novolavolain'ny mpitarika amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny analytics, ny marketing ary ny CX. Mandray an-tanana ireo mpitarika ireo sehatry ny analytics an'ny dia an'ny mpanjifa hanatsara ny paikadim-pamokarana fitakiana fitadiavam-bola sy ny fahaizany mandrefy ny fahombiazany.
Ireo ekipa ireo dia manatsara ny famakafakana ny dian'ny mpanjifa ho:
Manangona angona momba ny dia an'ny mpanjifa
Mamaha ny mombamomba ny mpanjifa marobe
Fakafakao ny fifandraisana tsy tambo isaina mandritra ny diany miampita lakandrano
Fantaro ny teboka fanaintainan'ny CX sy ny antony fakany
Hamarino ny fanatsarana ny dia amin'ny mpanjifa mety
Quantify CX fampiasam-bola 'ROI
Sarintany momba ny dia an-tanan'ny mpanjifa vs. Analytics momba ny fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa
Amin'ny maha mpivarotra famoronana fangatahana anao dia mety efa nampihatra izany ianao sarintany an-tanan'ny mpanjifa ary mahatsapa fa manome fahitana mitovy amin'ny analytics momba ny dia nataon'ny mpanjifa. Mampalahelo fa tsy izany no izy. Na dia mifantoka amin'ny fahitana kalitao aza ny saritany dia ny fitsangatsanganana an-dàlan'ny mpanjifa no betsaka kokoa ary mampiditra habaka lehibe kokoa.
Static Snapshots vs. Detail tsy tapaka - Ny sarintany an-tsary dia tsy misy saripika static fotsiny amin'ny dian'ny mpanjifanao sasany ary tsy manana antsipiriany takiana mba hanehoana ny hamaroan'ny mpanjifanao sy ny fitondran-tenany tsy manam-paharoa.
Static vs. Data mifototra amin'ny ora - Ny analytics momba ny dia nataon'ny mpanjifa dia tarihin'ny angona mifototra amin'ny fotoana, ahafahanao mahita ny fiovan'ny dian'ny mpanjifa rehefa mandeha ny fotoana. Ny fahaizana mandrefy hatrany ny dia sarotra ataon'ny mpanjifa marobe sy fantsona miaraka amin'ny dia dia manampy ny mpivarotra haminany ny fahombiazan'ny dian'ny mpanjifa.
Fitsapana sy lesoka vs. fanandramana amin'ny fotoana tena izy - Raha tsy misy ny fahitana ny angon-drakitra vaovao momba ny fifandraisana tsirairay amin'ny dian'ny mpanjifa dia avela hanandrana fanatsarana vaovao amin'ny dian'ny mpanjifa iray manontolo ny orinasa. Tsy vitan'ny mandany fotoana sy enti-miasa fotsiny izany, fa midika kosa fa ny mpivarotra dia hiandry valim-panangonana miangona izay tsy mamaritra ny toerana misy ny olana.
Ny fanadihadian'ny dia nataon'ny mpanjifa dia manome ny fahitana ireo mpivarotra hahita ny fomba fandraisan'ny mpanjifa ny fanatsarana mandritra ny fotoana maromaro sy ny vanim-potoana. Ho fanampin'izany, ity fampiharana ity dia ahafahan'ny mpivarotra mizaha toetra sy manara-maso ny fahombiazan'ny fanatsarana ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy.
Nohamafisin'ny fianarana milina sy AI, ny fanadihadian'ny dia nataon'ny mpanjifa dia ahafahan'ny mpivarotra mamantatra ireo teboka fanaintainana mandritra ny dian'ny mpanjifa iray manontolo izay misy fiatraikany ratsy amin'ny CX. Ireo fahitana ireo dia ahafahan'ny orinasa tarihin'ny data manao laharam-pahamehana ny fahafaha-manatsara ny dian'ny mpanjifa sy mitondra ny fitomboan'ny vola miditra.
Te hiteraka fantsona 30-50% bebe kokoa ao anatin'ny 90 andro?
Tags: fihetsiky ny mpanjifafitadiavana mpanjifamombamomba ny mpanjifaMpanjanantanyfandalinana ny dia nataon'ny mpanjifaanalytics momba ny dia nataon'ny mpanjifatombony azo amin'ny analytics amin'ny dian'ny mpanjifasarintany an-tanan'ny mpanjifacxfitakiana fitakianavarotra fitakiana fitakianafunnelenvyfamakafakana fantsona maroFitomboan'ny fidiram-bolainona ny analytics amin'ny dian'ny mpanjifa